Maqaalka Austin Rolling ee Martech Zone |
Maqaallada by Austin Rolling
Austin Rolling waa aasaasaha iyo agaasimaha guud Dibedda. ganacsade jiil saddexaad ah. Wuxuu bilaabay shirkadiisii ​​ugu horaysay, websaydh dharka lagu sameeyo, isaga oo jira 20 sano. Waxa uu shahaadada BA ee isgaadhsiinta ka qaatay jaamacada Bariga Michigan iyo MBA oo uu ka qaatay Texas A&M University. Wuxuu inta badan shaqadiisa ku qaatay ka shaqeynta alaabada macaamiisha iyo booska IT ee iibka iyo suuqgeynta, maamulka iyo doorka horumarinta ganacsiga.
Maxay Tahay Sababta Iibinta Goobta iyo Suuqgeyntu Ay U Eegi Doonto Been Dheer Dhaqanka CRM
Talaado, Disembar 10, 2019 Talaado, Disembar 10, 2019 Austin Rolling
Maaddaama adduunyadu ay sii kordheyso shakhsiyadda iyadoo ay sii xumaaneyso tikniyoolajiyadda - baraha bulshada, sheekaysiga fiidiyowga, iwm. Fikrad mar uun timid dabiiciyan, dareen leh oo jirtay si aad u qurux badan kadib markii fikirka kadib loo weeciyay ku habboonayn, la qabsasho waqti qaali ah qaadata. Jidh ahaan ka hor imaanshaha dadka aad rabto inaad xidhiidh la yeelatid. Waxay umuuqataa aragti duurjoogta cad, laakiin xaqiiqda